Iingcamango eziphambili Iphepha lokusebenzela Iipendulo ezintathu eziphambili
Yeka! Ukuba ufikile kweli phepha uze ungagqiba i- Ideal Main Worksheet 3 uze uhambe apho uze ubuye ufumane iimpendulo! Eli phepha aliyi kuqonda ngenye indlela. Ngokuqinisekileyo, ukuqonda indlela yokufumana ingcamango ephambili yendima kubaluleke kakhulu, ngokunjalo, ngoko ukuba awuqinisekanga ukuba uqala kuphi, yenza uphando olutsha kunye nentloko emva.
Ukuqonda okubanzi kokufunda
Iimpapasho zePhasiwedi: Iingcamango eziphambili Iphepha lokusebenzela 3 | Iingcamango eziphambili Iphepha lokusebenzela 3 Phendula okhiye
Isiqendu 1: Ukusingqongileyo
Impendulo echanekileyo yiC. Ukhetho A lukwajonga kakhulu. Umhlathi awuniki umnxeba kwisenzo nangaliphi na indlela. Ukhetho B luncinci kakhulu, njengoko luhluleka ukukhankanya iimpembelelo ezingalunganga zokucoca indawo engqongileyo. Ukhetho D luphelelwe kwisihloko, nangona lukhohlisayo kuba usebenzisa i-verbiage kumhlathi. Umhlathi awuniki isifundo ekucoceni imo. Ukhetho C luchanekile kuba luquka isiqendu somhlathi wonke ngaphandle kokuncinci okanye kakhulu.
Isiqendu 2: Asperger's Syndrome
Impendulo echanekileyo ngu A. Nangona i-Asperger yinkathazo echaphazela iinkalo ezininzi zobomi bomntwana, eli nqanaba lijongene nokusebenzisana kwezentlalo, okuphelisa ukhetho. Ikhethelo C ayilungile kuba ixoxa kuphela ngento enye yentsebenziswano yentlalontle, eyenza ibe yincinci. Ikhethi D ayilunganga kuba ayilungile, ngokuhambelana nesiqendu - abantwana abane-Asperger bahlala banobuhlobo okanye banokugcinwa ngokufanayo kubahlobo abatsha nabahlobo bamandulo.
Isiqendu 3: Isithili seSikolo saseNorth Point
Impendulo echanekileyo nguD. Ukhetho A lukhulu kakhulu xa lufaniswa noKhetho D. Utshintsho olukhulu oluthethwa ngalo kwiChoice A lunokuba lubi, kanti zonke iinguqu ezichazwe kumhlathi ziphucula ngokwenene. Ikhethi D yenza ukubahluko. Ukhetho B lincinci kakhulu; lichaza kuphela ezimbini zokuphucula. Ukhetho C aluchanekanga.
Isiqendu 4: Abafundi abaneemfuno ezizodwa
Impendulo echanekileyo ngu B. Nangona ukhetho A lukhethi olufanelekileyo kwaye luyakwamkeleka ukuba akukho zikhetho ezifumanekayo, ukhetho B lusetshentshile ngakumbi, lubonisa indima yotitshala kwinkqubo, ekhankanywe ekupheleni komhlathi. Ukhetho C lukhulu kakhulu; akukho luhlobo lomfundi olukhankanywe kumhlathi. Ukhetho D aluchanekanga, kuba umhlathi awubonisi ukuba abafundi abaneemfuno ezizodwa kuphela abafundi abafumana naluphi uhlobo lwenkonzo.
Isiqendu 5: Imithetho
Impendulo echanekileyo ngu B. Ukukhethwa A kuncinci kakhulu. Ithetha kuphela neengxelo zeKumkani Arthur, kungekhona zonke iimbali, ezixutyushwa kwizivakalisi zokuqala ezimbalwa. Ukhetho C lukhulu kakhulu. Akathethi ngoKumkani uAbram nonke, isihloko sesahlulo sokugqibela somhlathi. Ukhetho D aluchanekanga kuba lufuna ukuba isigqibo sikaKumkani uArthur simanga, isitatimenti esingenziwanga kumhlathi.
Iifayile zokuSebenza zamahhala kunye nemiSebenzi
I-3 yeeNtetho eziKhetele zokuThuthukisa kwiNkcazo
Amanqwanqwa okuThatyulwa kwamaqela amaninzi
Indlela Yokufumana Injongo yoMbhali
UJane Fonda Uthetha nge "Monster-in-Law" kunye noJennifer Lopez
Imigaqo yeGalofu - Umthetho wesi-5: Ibhola
Inkqubo yesicelo seSchool Med
Biography kaGeorge Velazquez de Cuellar
Ngaba i-Iraq yiNtando yeninzi?
Iingcamango zobuhlwempuzekileyo beStimulus kuPhuhliso lweeLwimi
I-Dinosaurs enkulu, inyama-yokutya
Isotopes Inkcazo kunye nemizekelo eKhemistry
Isigaba esisodwa seQi Ukulima: Ukufumanisa i-Qi yethu
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwe-Steel ne-Aluminium Scuba Tanks?
I-Pair, Pare, neParear
Umbuso weNkcazo yeNkcazo
Iifilimu eziphezulu malunga ne-Italy
I-NHL Shootout Work ye-Controversial Work
I-Creeping Barrage yeWW1: Inkolelo kunye nokuSebenza